Jowhar.com - Somali news Leader - News: Qiisaba qiiseey keenta markana waa sheekadii hubaal caashaq iyo hinnaaso dumar qeybti 47aad.
December 13 2013 22:23:09
Qiisaba qiiseey keenta markana waa sheekadii hubaal caashaq iyo hinnaaso dumar qeybti 47aad.
Garaad markii ay intaa tiri ayaa uu doonay inuu dhunkato Sahro ayaa ku tiri
Waxba ha degegin guurka kadib
Garaad inta uu qoslay ayaa uu yiri
Ok ma xuma Sidii ayaa leysku macasalaamay oo lagu balamay Sahro maalintii xigtay ayaa ay bilaawday in ay aroos isu diyaariso Hooyo Maryan ballantii waa ay ka so baxday oo usbuuc kadib iyada iyo wiilkeeda & Sahro waxa u ambabaxeen dalka Soomaaliya iyadoo waliba soo dhaweyn fiican ka helay reerka Sahro Aabe nuur waxaa la weynaa gabadhiisa oo nool oo uu dib u arkay waxayna Xaajiyada ka warbixisay sababta ay u yimaadeen iyo in ay ugu soo googol fadhiisteen gabadhooda Aabe Nuur arrintaa kama labalabeynin inuu ka fikiro waana uu ka aqbalay oo si buuxda loo siiyey Xaajiyo Maryan oo codsaday in waqtigeeda oo yar gabadha lagu mehriyo oo ay maalin kadib ay dib u laabtaan maadaama ay dooneysay in ay xagga xaflad aroos ku dhigato sidii ayaana la yeelay oo sidii lagu mehriyey Sahro iyada oo farxsan markaan ka huleeshay magaalada Muqdishu iyadoo mar walba ku duceysaneysay in Garaad uu illaah ka yeelo mid ilaaw siiyo noloshii cabsida laheyd ee ay ku nooleyd.
Sahro markii la yimid Magaalada Nayrobi Hotel ayaa la dejiyey oo loogu tala galay in maalmaha arrooska ka dhiman ay fursad u hesho in ay isku diyaariso iyada hablo badan oo iyada qurxiya loo kireeyey maalin walba qurxinteeda ayaa la haayey waxaana Xaflad aad u qiimo badan oo dad sare ay ka soo qeyb galeen loogu qabtay Sheraton Hotel.
Ciise indhahiisa ayaa uu ku arkay warqadii Invitaion arooska Sahro wuxuuna isku qanciyey in shakikiisa uu run ahaa oo arrin hore ugu dhaxeysay Sahro & Garaad. Sahro aad ayaa ay ugu qanacsadeen karaamada ay ka heshay Hooyo Maryan waxaana si farxadi ku jirta loogu guuriyey gurigii ay nolosha ka bilaabi laheyd Siraad iyo Ninkeeda oo ahaa ehelka kaliya ee Sahro u joogay Nayrobi ayaa ahaa kuwa si weyn ugu qeyb qaatay xaflada Arooska markii ay ka soo noqdeen ayaa ay goobta xaflada banaankeeda ay kula kulmeen Ladan oo wiil la socdo Ladan iyada markii hore garatay ayaa tiri.
Bal ii waran Maslax maasha allaah isma laheyn halkaan ayaad kula kulmeysaa.
Maasha Allaah Ladan adiga iyo halkaan.
Haa qoloyin ganacsi naga dhaxeeya ayaa halkaan igu casuumay Siraad oo aan jecleysan isla markaana hadalkooda ka jeesatay Ladan oo garatay isla markaana xasuusan wixii dhex maray ayaa ku tiri
Ladan: Ii waran Siraad ciyaalka ka waran waxaan filayaa in gadaashay ay wax soo kordheen
Waa qeyr illaah Maslax waa waqti dambe maad na soo kaxeysid
Qofkaan ayaan idiin barayaa waa Ninkaayga magaciisa waa C/llaahi
Maasha Allaah barasho wanaagsan C/llaahi waan ku faraxsan nahay C/llaahi:
Anigaba sidoo kale
Adigaa Maslaxoo iigu duceeyey nin fiican in aan helo waana hayaa Maslax:
Adigana samirkaaga ayaad ku heshay Siraad ma u hambalyeyneysid
Siraad oo weli si u xanaaqsan ayaa tiri
Midkaan ku waarto ayaan rajeynayaa inuu noqdo Sidii ayaana leysku macsalaameeyey oo qof waliba guriiisa u dhaqaaqay Maslax markii baabuurka la soo koray ayaa uu xaaskiisa ku yiri
Maxaad ugu xanaaqday markaad aragtay mise weli waad maseyreysaa
Waa naag ballaayo ah Maslax:
Maxaa dhacay ma maseyrsaa
Wallaahi Ladan uun baan necbanahay mooyee lagama yaabo in aan maseyro mar kale
Maxaa dhacay cudurkii ku haayey dawo miyaa loo helay
Siraad: Maya macaane kalsooni igu filan hore iigu muujisay marka waa in aan jaceylkaaga ka shakin Maslax:
Aad ayaan ugu faraxsanahay laakiin mid ogaaw abid ma dhaceyso in la ila kaa qeybsado
Sahro iyo lamaanaha cusub ee nolosha caawa u bilaabatay ayaa qolkoodii ku kiliyoobay Sahro xishood badan ayaa ka muuqday balse Garaad oo dooneynin inuu wax walba deg deg ku wado ayaa yiri
Waan ku fahmi karaa xishoodka aad dareemeyso laakiin aniga ma degdegsani mana doonayo in aan ku dhibo
Arrinta aan labo u kala qaado tan xishoodka eed kuma lihi oo xishoodka haweenka soomaalida hu ayaa uu u yahay teeda kale hadaadan caawa nolosha ila bilaabin lagama yaabo in aan noloshii hore ilaawo marka looma baahno in aad waqti kale I siiso haddii aad shalay la noolaa qof aan jeclahay isla qofkiina uu I xumeeyey manta waxaan diyaar u ahay in aan la noolaado qof I jecel oo aan hubo inuusan xumaan ii quurin. Sahro markii ay intaa tiri ayaa Garaad waa siduu rabayee inta uu ku soo booday markii ugu horeysay noloshiisa dhunkatay Sahro oo ku yiri
Garaad: Waa runtaa macaanto qofka ku jecel marnaba lagama yaabo in ay ku dhibaateyso Caawa waxaan rabbiga ka baryaa in ay dhexdeena ka dhashaan Muktaar & Maryan. Sahro:
Maya Garaad ciyaal badanaa rabaa waxaana kuu ballan qaadayaa hooyadii xannaaneyn laheyd in aan noqdo
Aniga aabihii farxadooda ka shaqeyn lahaa ayaan ahaan doonaa laakiin Sweaty waqtiga yuusan naga dhumin ee hore aan u socono.
Waxba haka cabsan hamuuntii aad mudo ii qabtay caawa waad ka bogan doontaa Sahro nolosheeda cusbeyd ayaa ay gacmaha qabsaday illaahna waxa uu kaga yeelay mid ay ku liibaanto waxayna maalin qura ayaa ay wada umaleen iyada Saaxiibteed Siraad oo ay wiil wada dhaleen iyagoo Garaad & Maslaxna ay ku heshiiyeen in ay magacyada isdhaafsadaan iyadoo wiilkii Maslax loogu wanqalay Garaad halka wiilkii Garaadna loo bixiyey Maslax taasi waxay aheyd arrin ay aad ugu wada faraxsanaayeen.
Sahro & Siraad qof walba nolosha uu nasiibkeeda siiyey waa ay ku faraxsanaayeen iyagoo helay lamaano iyaga jecel oo dhibta & dheeft la qeybsada.
Waa qeybti ugu dambeysay sheekadi tixanaha aheeyd ee Hubaal caashaq iyo hinnaaso dumar waxii fikirkada ku soo dir bogeyna facebook ga Riix halkan si aad u reebto fikirda
Ama Emailka hoose
Hubaal caashaq iyo hinnaaso dumar waxeey qaas u tahay Jowhar.com kala soco Jimco walba insha Alah.
HUBAAL CAANSHAQ & HINNAASO DUMAR
PENNED BY XAALKOOS xaalkoos@hotmail.com
Young Editor of Middle Shabelle Region/Jowhar
Dhawaan waxaad naga sugtaan sheeko cusub oo aan horey loo maqaal lona araag markana waa Samir Caashaq Sad maleeyahay Somali news leader
Hanad on September 13 2013
0 Comments · 5757 Reads
jowhar.com3,199,468 unique visits